Dissertation any amin'ny oniversite amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny disertation ambony indrindra amin'ny College || || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Manoratra disertation any amin'ny oniversite - Ny tokony hataonao
Ny dissertation any amin'ny oniversite dia matetika lahatsoratra an-tsoratra an-tsoratra nosoratana nandritra ny taona ambaratonga faharoa tao amin'ny lisea na teo anelanelan'ny zandriny sy ny zokiny. Amin'ny ankapobeny dia fanadinana fampitahana izay mandinika fomba fijery samihafa amin'ny lohahevitra iray. Ny teboka amin'ireto tetik'asa ireto dia ny hampahafantatra ny fomba ahafahan'ny fianarana avy amin'ny traikefa akademika iray nafindra tamin'ny hafa. Izany dia afaka manampy ireo nahazo diplaoma hamantatra ny momba ny mana-pahaizana manokana tany am-pianarana ary mety hanome aingam-panahy azy ireo hanohy ny asany aza.
Alohan'ny hividiananao zavatra amin'ny Internet hanampy anao amin'ny disertanao eny amin'ny oniversite, dia mila mitady serivisy hanampy anao amin'ny fanoratana azy ianao. Tokony hizaha ireo tranokalan'ny orinasa aloha ianao raha hahitana raha manolotra fitsarana maimaimpoana izy ireo. Serivisy vitsivitsy dia hamela anao hanao fitsapana voalohany mandritra ny fotoana kelikely. Io dia ahafahanao mahita ny fomba fiasan'ny rindrambaiko sy ny karazan-kevitra azonao antenaina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy ho fitsapana dia azonao antoka fa handeha hiasa amin'ny filanao ilay rindrambaiko alohan'ny ividiananao azy.
Rehefa mahita serivisy hividianana ianao dia ho afaka hamorona ny diary nataonao. Homena torolàlana ianao amin'ny ankapobeny hanarahana ny fanoratanao ny vatan'ny taratasy, ary koa ny fehiny. Mety homena ohatra kaody vitsivitsy ianao izay ahafahanao misintona ny angon-drakitrao manokana sy mikaroka ny lohahevitro. Hevitra tsara ny manangona ireo santionany izay ampiasainao amin'ny serivisy mba hahazoana antoka fa mitovy endrika sy kalitao izy ireo toy ny santionany avy amin'ny mpampianatra anao. Ho fanampin'izay, alao antoka fa afaka mahita mora foana ireo rakitra rehetra ilainao amin'ny Internet ianao rehefa lany ny fitaovana.
Avy eo dia te hanoratra ny fampidirana ny taratasinao ianao. Tokony ho 500 teny izany, ao anatin'izany ny fanekena. Hitodika any amin'ny bibliography ianao avy eo mba hanomezana antsipiriany fanampiny momba ny loharano sy ny andinin-tsoratra masina nampiasanao. Tokony ampidiro ao amin'ity ampahan-taratasy ity koa ny adihevitra momba ny fomba fiasa.
Ny ampahany manaraka amin'ny fanoratana dissertation dia ny fanangonana ny fikarohana rehetra nataonao sy ny fanamarihanao ho lasa drafitra marokoroko. Amin'ity fizarana ity dia tokony ahitsinao aloha ny lesoka rehetra momba ny fitsipi-pitenenana ary manorata fehezanteny vitsivitsy momba ny maha-zava-dehibe ny safidinao lohahevitra. Azonao atao ny manomboka manoratra ny vatan'ny taratasinao. Ny ankamaroan'ny asanao amin'ity dingana ity dia ny fanangonana ny fikarohana sy ny fitanisana nataonao. Saingy, amin'ity fotoana ity dia azonao atao ihany koa ny manapa-kevitra raha hividy boky voasoratra momba ny lohahevitra, mba hitsitsiana fotoana.
Raha vantany vao nahavita nanoratra ny diary nataonao ianao, dia azonao atao ny misafidy ny hividy boky voasoratra amin'ny lohahevitra mitovy aminao. Na izany aza, tsy tokony hieritreritra ianao fa ny mpianatra rehetra amin'ny oniversite dia manana fotoana na fahaizana mividy boky ary mamaky azy io. Raha ny marina dia mety te hitady ny kinovan'ny mpianatry ny oniversite amin'ilay boky ianao amin'ny Internet, mba hitsitsiana fotoana sy vola. Azonao atao koa ny manontany amin'ny mpanolotsainao na mpampianatra anao eny amin'ny oniversite raha toa ka azo vidiana ilay boky.
Rehefa avy nahavita ny fikarohana sy nanoratra ny dissertation-nao ianao dia mila mividy kopian'ny endrika antontan-taratasy (DIF) takiana amin'ny anjerimanontolo ho an'ny fandefasana disertation anao. Izany dia takian'ny programa amin'ny oniversite rehetra mba hanamarinana fa ara-dalàna sy marina ny fikarohana nataonao. Ny endrika fanaovana dissertation any amin'ny oniversite dia mety miovaova kely amin'ny programa iray mankany amin'ny manaraka. Matetika ny mpamoaka boky na oniversite dia hanana lisitr'ireo zavatra vita an-tsoratra natolony ho mendrika DIF. Na izany aza, aza miantehitra irery amin'ity lisitra ity, ary manandrana manamarina ny maha-ara-dalàna ireo publication.
Farany, te-handefa ny dissertation-nao any amin'ny oniversite na oniversite ianao mba hahavitana ny mari-pahaizana. Azonao atao ny mividy kopia an'ilay disertasy na misintona amin'ny Internet. Raha hividy kopia sarotra ianao dia tokony ho azonao antoka fa ny mpanonta na ny oniversite namoaka ny mari-pahaizana dia mbola tsy namoaka na namela ny fizarana ilay disertation. Raha te-hamita ireo dingana rehetra ireo dia azonao atao ny manofa mpampianatra mpanazatra amin'ny oniversite mba hanomezana anao fanampiana matihanina amin'ny asa soratra. Ny mpampianatra anao dia afaka manome anao torohevitra momba izay tokony hialana mba hahamora kokoa ny fampianarana any am-pianarana.